Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chivabvu 05, 2020
Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa dzinoti; Muzvare Thabitha Khumalo, VaProsper Mutseyami, VaChalton Hwende pamwe naAmai Lilian Timveos vadzingwa muparamende nhasi mushure mekunge bato reMDC-T inotungamirwa naMuzvare Thokazani Khupe razivisa paramende kuti nhengo ina idzi dzidzingwe muparamende.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya kudzingwa kwaitwa muparamende kwenhengo dzeMDC inotungamirwa naVaChamisa.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi pamwe nedzehutano dzinoti hurumende haina kuratidza kurongeka payakati mamwe mapazi ezvehupfumi munyika avhurwe dzichiti izvi zvichaita kuti zvinhu zvishate munyika sezvo zvinhu zvisina kujeka.
Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vochema chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa uye vanhu ava vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa.
Muchirongwa che The Connection na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCoronavirus takatarisa zviri kuitwa nevechidiki.